Elephone R8 smartwatch analysis သည်အလွန်နည်းပါးသည် Gadget သတင်း
ဒီနေ့ငါတို့ကြိုးစားချင်တဲ့ထုတ်ကုန်အကြောင်းမင်းကိုအရမ်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သုံးသပ်ချက်တစ်ခုယူလာပေးတယ်။ Smartwatches သည် gadget များထဲတွင်ရှာဖွေမှုအများဆုံးအရာတစ်ခုဖြစ်သည် ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ကိုင်ဖုန်းတွေနဲ့ပြီးပြည့်စုံတဲ့ပြိုင်ပွဲကိုပြီးအောင်လုပ်ပါ။ စမတ်နာရီကိုရက်အနည်းငယ်အတွင်းစမ်းသပ်နိုင်ပါပြီ Elephoneအဆိုပါ R8, ငါတို့ကချစ်ကြတယ်။
လက်မှတ်ပေါင်း အီလက်ထရောနစ်နည်းပညာကိုကမ္ဘာပေါ်တွင်မသိရှိရသေးပါ။ ခက်ခဲသည့် Android စျေးကွက်တွင်ခြေကုပ်ယူနိုင်ခဲ့သည့်စမတ်ဖုန်းမော်ဒယ်များစွာ၏ကျေးဇူးကြောင့်ကျန်ထုတ်ကုန်များသည်မြှင့်တင်ရေးအလုပ်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းနှင့်အတူရောက်လာသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အရင်ရှိကြောင်းအတည်ပြုရန် Elephone ၏စမတ်နာရီရောက်လာသည် မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်စျေးနှုန်းများမှာအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်.
2 Unphoneing Elephone R8 စမတ်နာရီ
3 Elephone R8 အတွက် "ထိပ်" ကိုဒီဇိုင်းဆွဲပါ
5 Elephone R8 အချက်အလက်စာရင်း
စမတ်နာရီကိုဝယ်ယူရန်အလေးအနက်စဉ်းစားသောအခါမည်သည့်စျေးနှုန်းအတိုင်းအတာအထိကျွန်ုပ်တို့လှုပ်ရှားနိုင်သည်ကိုကြည့်ရှုရန်စျေးကွက်ကိုအမြဲကြည့်ရှုလေ့ရှိသည်။ သေချာပါတယ်၊ လှုပ်ရှားမှုလက်ကောက်အများကြီးပြောင်းလဲကြပါပြီ မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း။ ထိုအအချို့ကိစ္စများတွင်တစ် ဦး လည်းမရှိ အချို့ smartbands နှင့် smartwatches အကြားနီးပါးကွာခြားချက်.
စျေးကွက်ကိုအနည်းငယ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း, စျေးဝယ်ခြင်းတွင်လက်ပတ်ကြိုးများကို R8 ထက်များစွာမြင့်မားစွာဖြင့်အလွယ်တကူရှာဖွေနိုင်သည် အီလက်ထရောနစ်။ နှစ်မျိုးစလုံးမှပေးထားသောအင်္ဂါရပ်များနှင့်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းများကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလျှင်ပင်သူတို့မှာနာရီထက်နည်းသောကြောင့်သူတို့သည် ပို၍ စျေးကြီးကြသည်။ ဒီအဘို့, အများကြီးပိုသည် ကျနော်တို့ Elephone အားဖြင့်ပျော်မွေ့အံ့သြခဲ့ကြပြီ R8 စမတ်နာရီ။
အရည်အသွေးနှင့်စျေးနှုန်းအကြားချိန်ခွင်လျှာရှာဖွေခြင်း ထုတ်ကုန်တစ်ခု၏ထုတ်လုပ်သူအားလုံးသည်အောင်မြင်လိုသောအရာဖြစ်သည်။ ပြီးတော့စားသုံးသူအားလုံးရှာချင်ကြတယ်။ အီလက်ထရောနစ် အရမ်းနီးကပ်လာ ခေါင်းပေါ်မှာလက်သည်းထိမှန်ရန် R8 စမတ်နာရီနှင့်အတူ အကြောင်းပြချက်များစွာအတွက်။ ထိုကဲ့သို့သောပြည့်စုံလက်ပတ်နာရီနှင့်အတူ ကြည့်ရတာအရမ်းကောင်းတယ် အကယ်၍ ၎င်းသည်အခြားထုတ်လုပ်သူများထံမှဖြစ်လျှင်၎င်းသည်များစွာကုန်ကျမည်ဖြစ်သည်။ Elephone R8 သည်ဘားကိုမြင့်တင်ရန်ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်သည် ဒီနေရာမှာသူ့ကိုရနိုင်တယ် လျှော့စျေးနှင့်ပရိုမိုးရှင်းလက်ဆောင်နှင့်အတူ
Unphoneing Elephone R8 စမတ်နာရီ
ဒီ smartwatch ရဲ့ပါးလွှာတဲ့ box ထဲကိုငါတို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ငါတို့မျှော်လင့်ထားသမျှကိုရှာပါ။ The စောင့်ကြည့် ပုံပေါ်သော foreground ၌တည်၏ unassembled ကြိုးနှင့်အတူဒါကကျွန်တော်တို့ကိုစက္ကန့်အနည်းငယ်လောက်ပဲကြာလိမ့်မယ်။ ဒီလက်ပတ်နာရီကိုသင့်လက်ထဲမှာကိုင်တဲ့အခါအရည်အသွေးနိမ့်တဲ့ထုတ်ကုန်တစ်ခုကိုကျွန်ုပ်တို့ရင်ဆိုင်နေရပြီဆိုတာသတိပြုမိပါတယ်။
ငါတို့မှာaသံလိုက်တံသင်နှင့်အတူ cable ကိုအားသွင်း သေချာစွာနှင့်လုံလုံခြုံခြုံချိတ်ဆက်ပါ။ ၎င်းတို့ကိုအလွယ်တကူနေရာချထားသောကြောင့်၎င်းတို့ကိုဆက်သွယ်ရန်မည်သည့်အားထုတ်မှုမှမလိုအပ်ပါ။ သေတ္တာတွင်မပါ ၀ င်သော cable အတွက်နံရံအားသွင်းအားသွင်းမှုကိုကျွန်ုပ်တို့လက်လွတ်နိုင်သည်။ ဒါကြောင့်ငါတို့မှာရှိပြီးသား USB port တစ်ခုလိုအပ်လိမ့်မယ်။ နောက်ဆုံးတော့ငါတို့အချို့ရှာတွေ့ အာမခံစာရွက်စာတမ်းများနှင့်အသုံးပြုသူလမ်းညွှန်တိုတို.
Elephone R8 အတွက် "ထိပ်" ကိုဒီဇိုင်းဆွဲပါ
မဆိုသံသယမရှိဘဲ, Elephone ၏စမတ်နာရီသည်၎င်း၏အားသာချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ငါတို့သည်မြင်ပါလိမ့်မယ် တစ်ခုတည်းမဟုတ်ကြောင်း၎င်း၏သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အတူ။ နာရီတစ်လုံးကနေစပါတယ် ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်း, ထောက်ခံသူတွေနဲ့ဝေဖန်သူများနှင့်တူညီသောအရေအတွက်ကရှိပါတယ်တစ်ခုခု။ တစ် ဦး နှင့်အတူတစ် ဦး ကနယ်ပယ် ကျနော်တို့ကြီးမားသောထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ကြောင်းအရွယ်အစား အရွယ်အစားနှင့်အတူ 1,28 လက်မ။ သေးငယ်တဲ့, ဒါပေမယ့်လက်ကောက်ဝတ်သေးသောသူတို့အဘို့ဖြစ်ကောင်းကြီးသောနာရီရှာနေသူများအတွက်စံပြ။
La dial ကိုသတ္တုအလွိုင်းပစ္စည်းများဖြင့်ဆောက်လုပ်ထားသည် ထိတွေ့ရန်တကယ်သာယာသောထိတွေ့မှုနှင့်အတူ။ ကြီးစွာသောရူပအဘို့အပွတ်အနား ပြီးတော့သူတို့မှာအလေးချိန်ရှိတယ်၊ ငါတို့ကခံနိုင်ရည်ရှိပြီးအရည်အသွေးရှိတဲ့ထုတ်ကုန်ကိုရင်ဆိုင်နေတယ်။ ဆော့ဖျဝဲ နှင့် Elephone ကဒီ R8 ကိုအကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သည့် interface ကို မျက်နှာပြင်တစ်ခုလုံးကိုအပြည့်အဝအားသာချက်ဖြစ်စေသည်.
ကျနော်တို့ရှာတွေ့နယ်ပယ်၏အစွန်းတွင် တစ်ခုတည်း button ကိုဆန့်ကျင်ဘက်လက်ဖြင့်အလွယ်တကူကြည့်ရှုနိုင်သည့်ဘယ်ဘက်ခြမ်းတွင်တည်ရှိသည်။ touch screen ရှိတယ် ကျွန်ုပ်တို့ပြုလုပ်သောအမူအရာပေါ် မူတည်၍ ရွေးချယ်မှုအမျိုးမျိုးရှိသည် ထိုအကြောင်း။ ထိတွေ့မှုဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖန်သားပြင်ကိုသက်ဝင်စေနိုင်သည်၊ လက်ကောက်ဝတ်ကိုဖွင့်သည့်အမူအယာနှင့်အချိန်ကိုလည်းစစ်ဆေးရန်လည်းပြုလုပ်နိုင်သည်။
ထဲမှာ နောက်ဘက်အဆိုပါနယ်ပယ်၏တစ် ဦး ဖြစ်ပါတယ် နှလုံးခုန်နှုန်းမော်နီတာများအတွက်အာရုံခံကိရိယာ။ ၎င်း၏အရွယ်အစားကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်၎င်းသည်မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုထိခိုက်လွယ်မှုမရှိဘဲလျင်မြန်စွာဖတ်ရှုနိုင်သည်။ အောက်ပိုင်းရိယာ၌ရှိကြ၏ အားသွင်းများအတွက် "တံသင်" ကျနော်တို့ပြောခဲ့သလိုပဲ charger ကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတာပါ။
Elephone R8 ကိုဝယ်ပါ အရောင်းမြှင့်တင်ရေးလက်ဆောင်နှင့်အထူးလျှော့စျေးနှင့်အတူတရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်မှာ
အထူးဖော်ပြချက်ထိုက်တန်ပါတယ် Elephone R8 သိုင်းကြိုး။ ၎င်းသည်နယ်ပယ်နှင့်ကပ်လျက်ရှိသည့်အဆုံး၌ရှိသည့်သေးငယ်သော tab ကြောင့်၎င်းကိုထည့်ရန်နှင့် / သို့မဟုတ်ဖယ်ရှားရန်အလွန်လွယ်ကူသည်။ ဖြစ်နိုင်သမျှခါးပတ်ကိုပြောင်းလဲစေသည်တစ်ခုခု။ ကျနော်တို့ကရှိပါတယ်ထိတွေ့ကြိုက်တယ်၎င်းသည်အသားအရေနှင့်၎င်း၏ဆောက်လုပ်ရေးအတွက်အသုံးပြုသောပစ္စည်းများ၏ပေါ့ပါးမှုအပေါ်မည်မျှကောင်းမွန်သည်။ ယင်း၏ကြံ့ခိုင်သောအသွင်အပြင်နှင့်ခံစားမှု၌လုံးဝမသြဇာလွှမ်းမိုးနိုင်သည့်အရာ။
ရယူရန် မတူညီတဲ့ menu options များ ကျနော်တို့ Elephone R8 ကကမ်းလှမ်းကျနော်တို့လေးယောက်ဖြစ်နိုင်သောလမ်းညွန်မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာလျှောနိုင်ပါတယ်။ ငါတို့လျှောလျှင် အပေါ်မှအောက်သို့အမြန်မီနူးကိုကျွန်ုပ်တို့ကြည့်ရှုနိုင်သည် ကျွန်ုပ်တို့တွင်အသုံးအများဆုံးသူများနှင့်ပင်စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်နိုင်သည့်အခြားဆက်တင်များထဲမှတစ်ခုမှာကျွန်ုပ်တို့သည်“ မနှောက်ယှက်ခြင်း” mode၊ “ ကျွန်ုပ်၏ဖုန်းကိုရှာခြင်း” သို့မဟုတ်တောက်ပမှုအဆင့်ကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။
ငါတို့လျှောလျှင် ညာဘက်မှလက်ဝဲသို့ ကျနော်တို့နှင့်ပတ်သက်။ သတင်းအချက်အလက်ရရှိရန် salud။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ကိုလှုပ်ရှားမှုကွင်းများ (အဆင့်များ၊ အကွာအဝေးနှင့်ကယ်လိုရီ) တွင်တွေ့နိုင်သည်။ ယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏နှလုံးခုန်နှုန်းကိုဖတ်ပါသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏အိပ်ချိန်ပမာဏနှင့်အရည်အသွေးအပေါ်ဒေတာများနှင့်တိုင်ပင်ပါ။ လျှော အောက်ခြေကနေထိပ်အထိ ကျွန်ုပ်တို့တိုင်ပင်နိုင်သည် အသိပေးချက်အားလုံး ကျနော်တို့စမတ်နာရီပေါ်မှာလက်ခံရရှိရန် configured ပြီ။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့လျှော ညာဘက်မှလက်ဝဲသို့ ငါတို့ဝင်ရောက်ခွင့်ရလိမ့်မယ် ပင်မ menu နှင့် options များ နာရီ၏။ ပိုမိုအဆင့်မြင့်သောချိန်ညှိချက်များအတွက်ဂီတ၊ အချိန်အချက်အလက်များ၊ секундနာရီနှင့်ကိရိယာဆက်တင်များကိုထိန်းချုပ်ပါ။ ဖြစ်နိုင်သမျှတစ်ခုလုံး catalog အဆိုပါ Elephone R8 ပြေးပါ စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာတစ်ခု အခုချိန်မှာ
Elephone R8 အချက်အလက်စာရင်း
ဖန်သားပြင် 1.28 "
resolution ကို 360 360 pixels ကိုက x
ဘက်ထရီ 280 mAh ဘက်ထရီ
ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေး အသုံးပြုမှုအထိ7ရက်
RAM ကို 128 ကို MB
ရှုထောင့် X ကိုက x 15.4 10.3 2.4 စင်တီမီတာ
အလေးချိန် 150 ဂရမ်
စြေး 42 10 €
ဝယ်ယူ link ကို Elephone R8
Elephone R8 ၏အကောင်းဆုံးနှင့်အကောင်းဆုံးအကြောင်းမပြောမီတစ်စုံတစ်ရာမှတ်ချက်ပေးခြင်းသည်မျှတမှုရှိသည် လြှောကျလှာ အသုံးပြုမှု၏။ ထုတ်လုပ်သူ၏ကိုယ်ပိုင်အက်ပလီကေးရှင်းရှိခြင်းသည်မည်သည့်စက်ပစ္စည်းမဆိုအသုံးဝင်မှုကိုတိုးတက်စေသည်ဟုကျွန်ုပ်တို့အမြဲတမ်းမှတ်ချက်ပြုသည်။ သို့သော်ဤတစ်ကြိမ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့မည်သို့မြင်ခဲ့ကြပြီနည်း နှင့် တတိယပါတီအက်ပလီကေးရှင်းသည်ကိရိယာတစ်ခုမှအကောင်းဆုံးကိုရနိုင်သည် ဒီလိုမျိုး။ အလွန်ကောင်းမွန်သောထပ်တူပြုခြင်းနှင့် FitCloudPro App နှင့်ကျွန်ုပ်တို့ရရှိနိုင်သောရွေးချယ်စရာအရေအတွက်။
El ပုံစံ ၏ Elephone R8 ၏စွမ်းဆောင်ချက်က၎င်းကိုအလွန်ဆွဲဆောင်မှုရှိသောစမတ်နာရီဖြစ်စေသည် ပရီမီယံကြည့်ရှုပါ.
အ အဆောက်အဦးပစ္စည်းများ သတ္တုအလွိုင်းနယ်ပယ်နှင့်၎င်း၏သိုင်းကြိုး၏ silicone နှစ်မျိုးလုံး။
အလွန်ကျယ်ပြန့် catalog configuration options နှင့်အသုံးပြုမှုဖြစ်နိုင်ခြေ။
ရှင်းရှင်းလင်းလင်း စျေးနှုန်း ၎င်းသည်အရည်အသွေးကိုပေးထားသောကြောင့်အလွန်အရေးကြီးသောအချက်ဖြစ်သည်။
၁.၂၈ လက်မအရွယ်ရှိစက်ဝိုင်းမျက်နှာပြင်တစ်ခုပိုင်ဆိုင်ထားပါ နာရီကြီးတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည် အချို့ခန္ဓာဗေဒသည်။
သူ့ကိုမရေတွက်ပါနှင့် adapter အားသွင်း လျှပ်စစ်စီးကြောင်းများအတွက်သေးငယ်တဲ့အမှားဖြစ်ပါတယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ယေဘုယျ » reviews » Elephone R8 စမတ်နာရီပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း